FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CORGIDOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Corgidor
Alika mifangaro mifangaro / Corgi mifangaro
Annabelle the Corgidor (Labrador Retriever / Corgi mix) 12 taona— 'Izaho dia efa nandefa ny sarin'ny alika Annabelle, fifangaroan'ny Lab / Corgi mamy izay navotanay fony izy tokony ho iray taona. Namoy ny zanakay mamy tamin'i cancer tamin'ny volana aprily. Izy dia 12. Mandria am-piadanana mpitaiza mamy, tianay ary malahelo anao izahay! (sy ireo sofina lehibe sy tongotra kely ireo !!) '
Ny Corgidor dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Corgi . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ny Corgidor anay dia taranaky ny reny Corgi feno sy raim-pianakaviana Labrador. Oops izy !! Ny tompon'ny ray aman-dreny dia mpiompy Lab sy Corgi. Charlie no anarany. Manana fomba mahatsikaiky momba azy izy amin'ny fanaovana 'tabataba.' Charlie no alika be feo indrindra nananantsika. Tsy mivovo loatra fa mitabataba fotsiny. Tena sariaka be izy ary tena tia ny olona rehetra sendra azy. Mihetsiketsika tsy tapaka ny rambony! Tiany ny mandehandeha miaraka amin'ireo zanakay ary milalao fakana koa. Izy koa dia tia ny Labrador maintinay, izay taritiny hatraiza hatraiza amin'ny vozon'akanjony. Izy dia nanampy tsara ny tranonay ary faly izahay rehetra nahita azy! '
Charlie the Corgidor, taranaky ny reny Corgi feno ary raim-pianakaviana Labrador
Hollywood ny mavo Lab / Corgi mifangaro (Corgidor) amin'ny 15 volana sy 33,6 pounds
'Annabelle dia Lab mavo / Welsh Corgi mifangaro. Nahazo an'i Annabelle izahay tamin'izy tokony ho herintaona, satria efa hitsoaka avy amin'ireo mpanararaotra azy, ary tonga tany amin'ny K-9 Country Club any Ennis, TX. Tsy nahay nilalao nandritra ny herintaona i Annabelle, mandra-panaoko ny baolina kitra sy ny lanezy. Manana ny fonon'ny Lab izy ary, raha tianay ny mivazivazy, ny tongotr'i Corgi. Izy tokoa no alika tsara indrindra nananantsika, noho ny hatsaram-pony sy ny hafanam-pony hampifaly ny rehetra. Tena velom-pankasitrahana i Annabelle fa manana fianakaviana be fitiavana izay manimba ny azy, ary tsy ho sambatra kokoa izy. '
Dinah Washington Powell the Corgidor amin'ny faha-4 taonany— 'Ny reniny dia tricolor Corgi ary ny rainy dia Labrador mainty. Tena hendry i Dina, tia miaina ao amin'ny condo misy azy miaraka amin'ny reniny sy dadany olombelona ary mandeha any Carmel, California, hihazakazaka eny amoron-dranomasina. Fantatry ny olona rehetra ao an-tanàna izy! '
Heidi the Corgidor amin'ny taona 1 miaraka amin'ny kilalaon-dohany
Pluto the Corgidor (alika mifangaro ao Labrador Retriever / Corgi) amin'ny 4 volana
alika mbola mandringa aorian'ny fandidiana acl
Reba the Corgidor puppy— 'Nanavotra azy tany atsimo Jersey izahay, na dia teraka tany South Carolina aza izy. Faly be izy niaraka tamin'ny zanakay 3, na dia somary kely nippy aza izy. Mifantoka amin'ny fanakanana ny manaikitra isika. Noraisiny mora ny crate fiofanana ary tsy afa-manoatra izy rehefa afaka 2 herinandro taorian'ny nodiany. Ny fandokoany dia maivana tahaka ny an'ny Lab mavo ary ny fananganana azy dia toa bebe kokoa amin'ny lafiny Lab ary misy paingotra lehibe sy tongotra lava kokoa noho ny Corgi. Mazava ho azy fa fohy kokoa ny sofiny noho ny Lab ary io fantsona fotsy miavaka io dia miakatra amin'ny orony ary mijanona eo an-tsorony dia marika manazava an'i Corgi. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Corgidor
tariby volo terrier yorkie Mix
alemanina mpiandry ondry weimaraner afangaro alika kely
alaskan malamute alika kely mpiandry ondry Mix